Akụkọ - akpa Cheertainer n'ime igbe abụrụla ọmarịcha nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ
N'oge a, akpa Cheertainer na nkwakọ ngwaahịa abanyela n'ime ihe ọ drinksụ drinksụ ihe ọṅụṅụ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, reagents ahụike, fatịlaịza mmiri mmiri, ọgwụ pesticides na ọtụtụ ubi ndị ọzọ. E jiri ya tụnyere ụdị nkwakọ ngwaahịa ọdịnala, uru asọmpi nke akpa dị na igbe gụnyere: ogologo ndụ nchekwa, ọkụ ka mma na ikuku oxygen, jiri ihe ole na ole ma nwee ike ịmegharị ya, nwere ike melite arụmọrụ nchekwa na njem njem, belata oke nchekwa na ụgwọ njem, wdg. .
Nkọwa na ngwa nke nkwakọba ihe n'ime igbe (Cheertainer)
Akpa-in-igbe (Cheertainer), dị ka aha ya pụtara, mejupụtara akpa nke ihe dị iche iche nwere ngwaọrụ mmiri na-emepụta mmiri na katọn mkpọ n'èzí.
Akpa dị n'ime: akpa n'ime akpa ahụ dị n'ime igbe ahụ bụ ihe nkiri mejupụtara, na-eji ihe dị iche iche eme ihe iji gboo mkpa nke nkwakọ ngwaahịa mmiri dị iche iche; Na-ejuputa ọnụ, nwere ike ahaziri size (site na 1L ka 1000L ikike nke igbe igbe nwere ike na-emepụta dị ka ndị ahịa chọrọ, dị iche iche film Ọdịdị na dị iche iche valves, izute mkpa nke dị iche iche ahịa njedebe). Dị ka: transperent igbe akpa, aluminized igbe akpa, aseptic igbe akpa, wdg.
Mgbanwe mgba ọkụ: nke PP, PE na ihe ndị ọzọ na-adịghị egbu egbu, akara a pụrụ ịdabere na ya, ọrụ na-agbanwe agbanwe. Ụdị nru ububa, gburugburu, ụdị plunger, ụdị bọtịnụ, ụdị mgbanwe na ihe ndị ọzọ.
Katọn: nke a na-eji akwụkwọ corrugated mee, nwere àgwà nke ike dị elu, ịdị arọ dị arọ na nchebe gburugburu ebe obibi, nwere ike nweta ezigbo nchebe njem nke ihe dị n'ime; Enwere ike ịme efere na ibipụta ihe dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji akpa Cheertainer n'ụdị nkwakọ ngwaahịa eme ihe na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, mmanya, ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, mmiri ịnweta, mmanụ oriri, ihe mgbakwunye nri, ọgwụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, reagents ọgwụ, fatịlaịza mmiri mmiri, pesticides na ihe ndị ọzọ.